Induction cooktop FAQ - Zhongshan Amor Isixhobo soMbane Co, Ltd.
Ngaba abapheki bokungeniswa bapheka ngokukhawuleza kunabapheki abaqhelekileyo bombane kunye nabarhasi?
Ewe, umpheki ongenisa induction ukhawuleza kunompheki wombane kunye nompheki wegesi. Ivumela ulawulo lwamandla okupheka kwangoko olufana nezibane zegesi. Ezinye iindlela zokupheka zisebenzisa amadangatye okanye izinto ezishushu ezibashushu kodwa ukufudumeza ubushushu kushushu imbiza.
Ngaba ukupheka kokungeniswa kungenisa ukusetyenziswa kwamandla okuphezulu?
Hayi, umpheki wokungeniswa uhambisa amandla ombane ngokungeniswa kwi-coil yocingo xa umbane uqukuqela kuyo. Okwangoku kudala ukutshintsha kwemagneti yomhlaba kwaye kuvelise ubushushu. Imbiza iyatshisa kwaye ishushu ngokuqulathwe bubushushu. Umphezulu wokupheka wenziwe ngezinto zeglasi-zeceramic esingavumisi ubushushu, ngoko ke bubushushu obuncinci kuphela obulahlekileyo emazantsi ebhodwe obenze ukungabikho kwamandla xa kuthelekiswa nokupheka kwelangatye kunye nokupheka kombane okuqhelekileyo. Iziphumo zoqheliso azishushubezi zijikeleze inqanawa, zikhokelela ekusebenzeni ngakumbi kwamandla.
3. Ngaba zikhona iingozi zempilo ezivela kwimitha yeyunithi yoqheliso?
Induction cooktops zivelise imitha yelitha ephantsi kakhulu, efanayo kwimvamisa yerediyo ye microwave Olu hlobo lwemitha luyancipha luze lube yinto engekhoyo kumgama weesentimitha ezimbalwa ukuya malunga neenyawo ukusuka kumthombo. Ngexesha lokusetyenziswa kwesiqhelo, awuyi kusondela ngokwaneleyo kwiyunithi yokusebenza yokungenisa ukuze ufumane nayiphi na imitha.
Ukupheka kokungeniswa kufuna ubuchule obukhethekileyo?
I-induction cooker ingumthombo wobushushu, yiyo loo nto ukupheka ngesipheki sokungenisa akukho mahluko kulo naluphi na uhlobo lobushushu. Nangona kunjalo, ukufudumeza kukhawuleza kakhulu ngesipheki sokungeniswa.
5. Ayiyiyo iglasi yokupheka ephezulu? Ngaba iya kuqhekeka?
Umphezulu wokupheka wenziwe ngeglasi yodongwe, eyomelele kakhulu kwaye inyamezelana namaqondo obushushu aphezulu kakhulu kunye notshintsho lwequbuliso lobushushu. Iglasi yodongwe inzima kakhulu, kodwa ukuba ulahla into enzima yokupheka, inokuqhekeka. Ekusetyenzisweni kwemihla ngemihla, nangona kunjalo, akunakulindeleka ukuba uqhekeke.
6. Ngaba kukhuselekile ukusebenzisa i-induction cooker?
Ewe, i-induction cooker ikhuselekile ukusetyenziswa kunabapheki abaqhelekileyo kuba akukho mililo ivulekileyo kunye nezifudumezi zombane. Imijikelezo yokupheka inokuseta ixesha lokupheka elifunekayo kunye neqondo lobushushu, inokucima ngokuzenzekelayo emva kokuba umjikelo wokupheka ugqityiwe ukunqanda ukutya okuphekwe kakhulu kunye nomngcipheko wokonakalisa umpheki.
Zonke iimodeli ezinje ngokubonelela ngemisebenzi yokupheka ngokuzenzekelayo kunye nokupheka okukhuselekileyo. Kwindlela yesiqhelo yokusebenza, umphezulu wokupheka uhlala upholile ngokwaneleyo ukuba ungabanjwa ngaphandle kokulimala emva kokuba isitya sokupheka sisusiwe.
7.Ngaba ndifuna i-cookware ekhethekileyo yokupheka ngokungeniswayo?
Ewe, izinto zokupheka zinokuphatha uphawu oluchaza ukuba luyahambelana nesitovu sokupheka. Iiphaneli zensimbi ezingenasici ziya kusebenza kwindawo yokupheka yokungenisa ukuba isiseko sepen sisigaba semagnethi sensimbi engenasici. Ukuba umazibuthe unamathela kakuhle kwipani yodwa, iya kusebenza kumphezulu wokupheka.